Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှု။ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်) | Androidsis
လူကြိုက်များသောတောင်းဆိုမှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှတ်ချက်ပေးရန်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာဖြစ်မည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါလိမ့်မည် Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ညှိချက်များ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ဖြစ်သည်ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောခြင်းမှာယနေ့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံး Launcher.
ဗွီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာတွေအပြင်၊ ဒီ post တစ်ခုတည်းမှာပဲမင်းရဲ့အဓိက Desktop အတွက်မှတ်ချက်ပေးတဲ့ configurations စာရင်းနှင့် application drawer ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားရန်ငါထားသွားမည်။ အေးမြလမ်း။
အရာအားလုံးအပြင်ငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့အ link များနှင့်အတူငါပေးမည် Nova Launcher ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ y Nova Launcher ချုပ်ဗားရှင်း အဖြစ် Google Feed ကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Nova Companion application အတွက် link Google Pixel လိုပဲအဓိကမျက်နှာပြင်ကနေညာဘက်ကိုလျှော။
၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်သင့်အား download link များပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် Play Store application များမှဗီဒီယိုအစတွင်ပြောပြခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Android ကိရိယာများအားလုံးတွင်များသောအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော application များ။ အိုး၊ ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ရှိသည့်နောက်ခံပုံများကိုလည်းမျှဝေသည်, လူတိုင်းကမတူညီတဲ့လူမှုကွန်ယက်များနှင့်တယ်လီဂရမ်မှမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုနေသည့်နောက်ခံပုံ။
Nova Launcher ကိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များ -
1 Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုသည်လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများ
2 ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ရှိသည့် wallpaper ကို download လုပ်ပါ
3 ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုသောအကြံပြုထားသော application အချို့
Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုသည်လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများ
Desktop ချိန်ညှိချက်များ: ၁၂၅% အမှတ်အသားဖြင့် ၉ × ၅ အိုင်ကွန်ရှိဇယားကွက်ပါရှိသည့် Desktop ။ Margin none ။ Dock ကိုစာမျက်နှာ ၅ ခုဖြင့်သာ enable လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဥပမာ - Communication, Media, Social, Files နှင့် Navigators နှင့် GPS - ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးများဆုံး app များပါသော folders ငါးခုပါလိမ့်မည်။
ဖိုလ်ဒါဆက်တင်များ: ပွင့်လင်းခြင်းမရှိဘဲအနက်ရောင်ဒေါင်လိုက်စွဲငြိဖွယ်ရာဖိုလ်ဒါ။ စက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအိုင်ကွန်များ၏ 145% တံဆိပ်များသို့ဖြန့်ဝေခြင်း။
အက်ပ်အံဆွဲချိန်ညှိချက်များ: Desktop အရွယ်အစားအိုင်ကွန်များနှင့်တံဆိပ်များပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်6×4စတိုင်အက်အံဆွဲ။ ပွင့်လင်းခြင်းမရှိဘဲအနက်ရောင်နောက်ခံအရောင်။ ကဒ်အောက်ခြေရှိအက်ပ်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုပြီးထိပ်တွင်ပြသသည်။ Tab ဘား mode၊ Top block tab စသည့်ထိပ်တန်းဘား။ မီနူးလုပ်ဆောင်ချက်အိုင်ကွန်များသည်ရှာဖွေမှုကိုသာရွေးပါ။ ပွင့်ရန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း၊ အညွှန်းညွှန်ကိန်း၊ အနီရောင်အလေးထားအရောင်ပါသောအစာရှောင်ခြင်း scroll bar ကို - အံဆွဲအုပ်စုများသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအမျိုးအစား (သို့) TABS ကိုထည့်သွင်းဖန်တီးရန် TABS ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆင့်မြင့်ပြီးပါကလျှောက်လွှာအံဆွဲ၏အနေအထားကိုမှတ်မိရန်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ရှိသည့် wallpaper ကို download လုပ်ပါ
ပုံကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည် Telegram မှ Androidsis အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှဖြစ်သည် ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်၏ Android တွင်ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုသောအကြံပြုထားသော application အချို့
Nova Launcher ကိုချုပ်
Amazon Music: Podcasts တွေကိုနားထောင်ပါ
TIDAL - တေးဂီတ streaming
ရေးသားသူ: 34labs - FM ရေဒီယိုနှင့်ပိုမိုသောအရာများ
ရေးသားသူ: OnePlus စပိန်နိုင်ငံ
ရေးသားသူ: Tapatalk Inc
Resize ငါ့ကို! Pro - ဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ညှိခြင်း
စျေးနှုန်း: € 1,59
AVS - ဗွီဒီယိုပြောင်းစက်မဆို
ရေးသားသူ: Skiller အက်ပ်များ
Google Keep - မှတ်စုများနှင့်စာရင်းများ
Sticker ကို WhatsApp အတွက်လုပ်ပါ
ရေးသားသူ: Sygic ။
Waze - GPS၊ မြေပုံများ၊
ရေးသားသူ: Waze အား
AutoBoy Pro ကို
လည်ပတ်ထိန်းချုပ်ရေး - လည်ပတ်, တိမ်းညွတ်
ရေးသားသူ: HDM Dev Team
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nova Launcher အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှု။ (ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်)
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။ tabs များအတွင်းစုစည်းထားသော apks အုပ်စုတစ်ခုစီနှင့် folder များကိုမည်သို့ စုစည်း၍ မည်သို့စုစည်းရမည်ကိုမသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
TENAA သည် Huawei Nova 5i အသစ်ကို ၄ င်း၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်4GB RAM ပါရှိသည်